ShweMinThar: March 2012
Posted by Alex Aung at 9:36 PM No comments:
ချစ်ခင်ရိုသေလေးစားအပ်ပါသော မိဘပြည်သူများနှင့် ညီနောင်သားချင်းများခင်ဗျား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးထဲဝင်ရောက်နိုင်ပါရန် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းကို ကျွန်တော် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်တော်သည် လှည်းကူးမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်သို့ သွားရောက်အားပေးခဲ့ပါ သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်များအား ဖော်ပြထားသောဂျာနယ်များကို ၀ယ်ယူအားပေးဖတ်ရှုခဲ့ပါသည်။
ကော့မှူးမြို့နယ် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အလုပ်လက်မဲ့ပြည်သူများအား အလုပ်အကိုင်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ပြောကြားမှုကို ကျွန်တော် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ခုနှစ်ထိ ကော့မှူး၊ ကွမ်းခြံကုန်းနယ်တွင် ဆားကွင်းဧက(၂၀၀)ခန့် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကော့မှူး ကွမ်းခြံကုန်းနယ်ရှိ လယ်မြေများသည် ရွှံ့စေးမြေများဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆောင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။စပါးတစ်မျိုးတည်းသာ စိုက်ပျိုးကြ ရပါသည်။ နွေရာသီတွင် ပင်လယ်ရေငန်ဝင်ရောက်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းကြောင့် နွေစပါးလည်း မစိုက်ပျိုးနိုင်ကြပါ။ မိုးစပါးတစ်မျိုးတည်းသာ အားထားကြရပါသည်။ မိုးစပါးရိတ်သိမ်းပြီးသောအခါတွင် ထိုဒေသမှ လယ်ယာလုပ်သားများအလုပ်အကိုင်မရှိဘဲ အားလပ်နေကြပါသည်။ ကော့မှူး၊ ကွမ်းခြံကုန်းနှင့် ဖျာပုံ၊ ဒေးဒရဲနယ်တို့တွင် ဆားကွင်းဧက ထောင်သောင်းချီ၍ ဖော်ထုတ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ကိုင် နိုင်ပါလျှင် နွေရာသီတွင် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေသော ကော့မှူးကွမ်းခြံကုန်းနယ်မှ လယ်ယာလုပ်သားများ အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့် မည်။ ရေချိုရေငန်စပ်ဒေသနှင့် သင့်တော်သော တီလားပီးယားနှင့် ကကတစ်ငါးများကို ဧကထောင်သောင်းချီ၍ မွေးမြူနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့မွေးမြူနိုင်ပါလျှင် ဒေသခံအလုပ်လက်မဲ့များ အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်ပါမည်။ ဒေသ၏ လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေလည်း တိုးတက်များပြား လာပါလိမ့်မည်။
ဆားကုန်ကြမ်းမှနေ၍ ကော့စတစ်ဆိုဒါ၊ အရောင်ချွတ်ဆေးမှုန့်၊ ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်စသည့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ပါ သည်။ ထိုဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကို စက်မှုလုပ်ငန်းတော်တော်များများတွင် အသုံးပြုကြပါသည်။ သို့ပါ၍ စက်မှုထွန်းကားသောနိုင်ငံများ သည် ဆားသုံးစွဲမှုအလွန်မြင့်မားပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဆားသုံးစွဲမှုတွင် စက်မှုကုန်ကြမ်းအဖြစ်သုံးခြင်းက စားသုံးခြင်းထက် အဆ(၉၀) မြင့်မားပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆားကို စက်မှုကုန်ကြမ်းအဖြစ်သုံးခြင်းက စားသုံးခြင်းထက်(၁၀)ဆပိုများပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ဆားကို စက်မှုကုန်ကြမ်းအဖြစ်သုံးစွဲခြင်းသည် စားသုံးခြင်း၏ (၁၀)ပုံ (၁)ပုံမျှသာရှိပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံလောက် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး လာလျှင်ပင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌လက်ရှိ ဆားကွင်းဧကထက် (၁၀)မျှ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ နွေရာသီတွင် အလုပ် လက်မဲ့ဖြစ်နေသော ကော့မှူးကွမ်းခြံကုန်းနယ်မှ လယ်ယာလုပ်သားများအပါအ၀င် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရခိုင် ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှ လယ်ယာလုပ်သားများ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အလုပ်အကိုင်ရရှိကြပါလိမ့်မည်။
သို့သော် ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် အမေရိကန်နှင့် အနောက်အုပ်စုတို့က စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ထားခြင်းကြောင့် ဆားကုန်ကြမ်း သုံးစွဲသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ မထွန်းကားခဲ့ပါ။
ပြည်တွင်း စားသုံးမှုတစ်ခုတည်းကိုသာ အားကိုးနေရခြင်းကြောင့် ယခုအခါ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆားကွင်းများ ၃၀%ခန့် ရပ်ဆိုင်းသွားကြပါ သည်။ ဆားတောင်သူများ၊ ဆားလုပ်သားများ၊ လုပ်ငန်းမဲ့ဘ၀၊ အလုပ်လက်မဲ့ဘ၀သို့ ရောက်ခဲ့ကြရပါသည်။ ချေးငွေများကိုသာ ပြန် လည်ပေးဆပ်ရမည်ဆိုပါက ကျွန်တော်အပါအ၀င် ဆားတောင်သူတော်တော်များများသည် ဒေ၀ါလီ(လူမွဲ)ခံယူကြရပါလိမ့်မည်။
မြန်မာနိုင်ငံထွက်ငါးများကို အမေရိကန်နှင့် အနောက်အုပ်စုတို့က စီးပွားဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့သည့်အနေဖြင့် ၀ယ်ယူခြင်းမပြုကြသော ကြောင့် လက်ရှိ ငါးမွေးကန်များပင် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းလျှော့ချနေရပါသည်။
ဤသည်မှာ ကျွန်တော်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ဆားလုပ်ငန်းနှင့် ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတို့မှ အခြေအနေတို့သာဖြစ်သည်။ အခြား လယ်ယာကဏ္ဍ၊ စက်မှုကဏ္ဍ၊ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍတို့မှ လုပ်ငန်းတို့သည်လည်း စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းဒဏ်ကို မရှူမလှ ခံစားနေရပေလိမ့်မည်။
အမေရိကန်နှင့် အနောက်အုပ်စုတို့က မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် တောင်းဆိုခဲ့ ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အလုပ်လက်မဲ့ မြန်မာပြည်သူများကို အလုပ်အကိုင်ရစေလိုပါလျှင် မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ် ရန် မိမိ၏တောင်းဆိုမှုများကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရန် ပြောဆိုရပါမည်။
အလုပ်လက်မဲ့ ကျေးလက်ပြည်သူများကို အလုပ်ရရှိအောင်လုပ်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုပြီး တကယ်လက်တွေ့တွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွား ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ရန် မိမိ၏တောင်းဆိုမှုကို မရုပ်သိမ်းခဲ့ပါလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မိမိနှင့် ပါတီရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိရန် ရိုးသားသော ကျေးလက်ပြည်သူတို့၏ မနောအကြိုက်ကိုလိုက်ကာ မဲဆွယ်စည်းရုံးသူဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အလယ်ပစ္စယံညီလာခံတွင်
"အချို့သော လူလိမ် လူညာတို့က ရိုးသားသောကျေးလက်ပြည်သူတို့၏ မနောအကြိုက်ကိုလိုက်ကာ အငိုက်ဖမ်းပြီး စားပေါက်ထွင်ခြင်း ကို နိုင်ငံရေးဟု ဆိုရမည်လော"
ဟု မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ဖဆပလခေါင်းဆောင် ဦးနုသည် ရိုးသားသော ကျေးလက်ပြည်သူတို့၏ မနောအကြိုက်ကိုလိုက်ကာ မိမိနှင့် မိမိပါတီ အာဏာရရန် မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ပါသည်။ ဦးနုသည် ဗိုလ်ချုပ်၏သမိုင်းဝင်မေးခွန်းကို ဖြေဆိုသင့်ခဲ့သည်။
ယခုအခါ ဗိုလ်ချုပ်၏မေးခွန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေဆိုရန်အလှည့်သို့ကျရောက်နေပါပြီ။
အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီရေးဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားပိတ်ဆို့ ဒဏ် ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရက လူ့အခွင့်အရေးရရှိအောင် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှ စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ရုပ်သိမ်းသင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဤသို့မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးတို့နှင့် အလဲအလှယ်ပြုလုပ်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ တော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့အား ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်တူနေပါသည်။
ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာစေရန် စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးရန်မှာ တစ်ပိုင်းသတ်သတ်ဖြစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးတို့အပေါ် အစိုးရ၏ဆောင်ရွက်မှုများကို ဝေဖန်ထောက်ပြရန်မှာ တစ်ပိုင်းသတ်သတ်ဖြစ်ပါသည်။ ငရဲမင်းလည်း မှားနေပါသည်။
ငရဲမင်း၏အမှားများကို ပြုပြင်ရန်လိုပါသည်ဟု နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် 'ငရဲမင်းနှင့် ငမင်းဆွေ'ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျွန်တော်ရေးသား ခဲ့ပါသည်။
အီရတ်နိုင်ငံကို အမေရိကန်နှင့် အနောက်အုပ်စုတို့က စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါးများပြတ်တောက်သွား ပြီး အီရတ်ကလေးငယ်အမြောက်အများ သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းသည် လူသားတွေကို သေစေနိုင်တဲ့ အထိ ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို ဘယ်လိုမှမငြင်းနိုင်ပါ။
စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ မစု(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)ငြင်းမှာလား၊ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်း ပြချက်နဲ့တကွ လူသိရှင်ကြား မစု ငြင်းဆိုနိုင်ပါတယ်၊ ဒီလိုမှမငြင်းနိုင်လျှင်တော့ စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာ အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ မစုဝန်ခံရပါလိမ့်မည် ဟု 'ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့(၂)' အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင် ရေးသားခဲ့ပါသည်။
ထိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံးသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ ရောင်းအားကောင်းသော ပြည်တွင်းသတင်း ဂျာနယ်များကလည်း ဖော်ပြပေးခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် ပေးပို့ပြီး တစ်နှစ်ကျော်ကြာသည့်တိုင်အောင်၊ သတင်းဂျာနယ်များတွင် ပါရှိပြီး တစ်နှစ်ကျော်ကြာသည့်တိုင်အောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းသည် အကြမ်းဖက်ခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် ဆိုသည်ကို ဘာမှ မပြောဆိုခဲ့ပါ။
ပြည်တွင်းမီဒီယာများကို အကြောင်းကြားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံးသို့ ကျွန်တော်သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံလိုပါကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ရုံးတွင် ယဉ်ကျေးစွာ ခွင့်တောင်းခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ငါးမင်းဆွေ နှင့် မတွေ့နိုင်ဟု ပြောဆိုကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုံးအဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ဦးဝင်းထိန်က မီဒီယာများရှေ့မှောက်တွင် လူသိရှင်ကြားပြော ဆိုခဲ့ပါသည်။
ချစ်ခင်ရိုသေလေးစားအပ်သော မိဘပြည်သူများနှင့် ညီနောင်သားချင်းများခင်ဗျား
စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းသည် အကြမ်းဖက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက် များဖြင့် မြန်မာပြည်သူတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြရန်လိုပါသည်။
ထိုသို့မှ မရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့လျှင် စီးပွားပ်ိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းသည် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀န်ခံပြောဆိုရပါလိမ့် မည်။
"အမေရိကန်နှင့် အနောက်အုပ်စုတို့မှ မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ရန် ကျွန်မ၏ဆောင်းဆိုမှုသည် မှားယွင်းခဲ့ပါကြောင်း သို့ပါ၍ ထိုတောင်းဆိုမှုကို ရုပ်သိမ်းပါကြောင်း"
သို့မှသာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို မဲပေးသင့်/မသင့် စဉ်းစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် စီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုအတိုင်း ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်နေ ပါလျှင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို မဲပေးရန် လုံးဝထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
ဤသည်မှာ ကျွန်တော် ငါးမင်းဆွေ၏ သဘောထားဖြစ်ပါသည်။
မိဘပြည်သူများနှင့် ညီနောင်သားချင်းတို့အနေဖြင့် မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှိပါက မဲရုံးသို့သွားရာက်ပြီး မဖြစ်မနေဆန္ဒမဲပေးရန်လိုပါသည်။ ဤသည်မှာ နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် မိမိ တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပါတီလည်းမရှိ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလည်းမရှိဟုဆိုပါက မဲရုံမသွားဘဲလည်း နေနိုင်ပါသည်။
စာကြွင်း။ ။ ၂၄ရက်နေ့ ကျွန်တော်အလုပ်ရှိရာ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဘက်က လမ်းသွယ်တစ်ခုတွင် A4 Size စာရွက်အစုံတော်တော် များများ လမ်းဘေးမှာတွေ့ရသဖြင့် ကောက်ယူဖတ်ကြည့်ရာ ငါးမင်းဆွေ၏ လက်ကမ်းဝေသည်ဆိုသော စာရွက်များဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရ ပါသည်။ သူပြောသည်များ မှန်သည်မမှန်သည်ဆိုတာကိုတော့ စာဖတ်သူများသာ ဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြစေချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပြန်လည် ဝေငှရုံသက်သက်ဖြစ်ပါသည်။ မူရင်း စာရွက်ထဲမှ ငါးမင်းဆွေလက်မှတ်ပါသည့် စာမျက်နှာအား ဓာတ်ပုံအဖြစ်ပူးတွဲဖော်ပြလိုက် ပါသည်။ စာလုံးအကျအပေါက်ကိုတော့ မူရင်းစာထဲမှာပါသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်ပြန်လည်ရိုက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါကြောင်း။
Health Screening ကျန်းမာနေဘို့ ရောဂါကြီးတွေ မခံစားရခင်ကတည်းက ပုံမှန် ဆေးစစ်နေသင့်တယ်။ မဖြစ်ခင် ကြိုတင်တဲ့ အလေ့အထကနေ ကိုယ့်အသက်၊ သူများအသက်တွေကို ကာကွယ်နိုင်တယ်။ Pap test သားအိမ်-ကင်ဆာ စစ်ဆေးနည်းနဲ့ Breast exam ရင်သား စစ်ဆေးနည်းတွေကို ပုံမှန်စစ်နေသင့်တယ်။ တချို့ရောဂါတွေကိုလဲ ကိုယ်ဟာ ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့-ကူးနိုင်တဲ့ အတန်းအစားထဲမှာ ပါနေရင် စစ်ရလိမ့်မယ်။ အစောဆုံး သိလာရင် စောစောကုသဘို့ အခွင့်သာပြီး အသက်ပိုရှည်ရှည် နေနိုင်ပါမယ်။ ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ။ ကင်ဆာလို၊ ဆီးချိုလိုရောဂါတွေကို ရောဂါလက္ခဏာ မပေါ်ခင်ကတည်းက စမ်းလို့သိနိုင်တယ်။ ဘယ်နည်းနဲ့ စမ်းရသလဲဆိုတာ အသက်၊ Risk factors ဖြစ်နိုင်ခြေ အန္တရာယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေအပေါ် မူတည်တယ်။
1. Breast Cancer ရင်သား-ကင်ဆာ။ စောစောသိလေး အသက်ပိုရှည်ရှည်နေနိုင်လေဖြစ်တယ်။ အသေးဆုံး ကတည်းက သိရင် ပျောက်သွားအောင် ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်။ သိပ်သေးတုံးမှာ တက်စေ့တို့ အဆုပ်တို့ ဦးနှောက်တို့ဆီ မပြန့်သေးဘူး။ အသက် ၂ဝ-၃ဝ ကြးအမျိုးသမီးတွေ ကျန်းမာရေးစစ်ရင်း ၃ နှစ်တခါ ရင်သား-ကင်ဆာကို စစ်နေသင့်တယ်။ Mammography (မင်မိုဂရမ်) American Cancer Society အမေရိကန် ကင်ဆာ အဖွဲ့ကနေ အသက် ၄ဝ ကျော်သူတိုင်း တနှစ်တခါလုပ်ဘို့ လမ်းညွှန်ထားတယ်။ U.S. Preventive Services Task Force အဖွဲ့ကတော့ ၅-၇၄ နှစ်ရှိသူတွေ ၂ နှစ်တခါလုပ်ခိုင်းတယ်။ အဲလို ဓါတ်ရောင်ခြည် နည်းနည်းလေး သုံးပြီး စမ်းသပ်နည်းကနေ လက်နဲ့စမ်းလို့မရခင် ၃ နှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းက တွေ့နိုင်တယ်။ ဒါတောင်မှ ပုံမှန် (မင်မိုဂရမ်) မှာ မတွေ့တိုင်း ကင်ဆာ မရှိတာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါမယ်။
2. Cervical Cancer သားအိမ်ခေါင်း-ကင်ဆာ။ သားအိမ်အဝနေရာကို Human papillomavirus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ခဏခဏ ကူးစက်တာခံရရင် သားအိမ်ခေါင်း-ကင်ဆာ ဖြစ်ဘို့ အန္တရာယ်များတယ်။ စောစောစမ်း လို့သိရင် ပျောက်အောင် ကုဘို့လဲ လွယ်တယ်။ Abnormal precancerous cells တကဲ့ကင်ဆာမတိုင်ခင် (ဆဲလ်) တွေ မူမမှန် ဖြစ်ကတည်းက သိနိုင်တယ်။ Pap test (ပက်ပ်-တက်စ်) နည်းလုပ်ပါတယ်။ အမေရိကားမှာ အသက် ၂၁ နှစ်မိန်းကလေးတိုင်းကိုစစ်စေတယ်။ Vaccine for Cervical Cancer သားအိမ်ခေါင်း-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးလဲ ရှိနေပြီ။ Gardasil ဆေးကို အသက် ၉-၂၆ နှစ်တွေကိုထိုးစေတယ်။ အဖြစ်အများဆုံး HPV virus ၄ မျိုးရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးမယ်။ Cervarix ကာကွယဆေးကို ၁ဝ-၂၅ နှစ်သမီးတွေအတွက်ထိုးပေးတယ်။ ပိုး ၂ မျိုးကို ကာကွယ်ပေးမယ်။ သားအိမ်ခေါင်း-ကင်ဆာတိုင်းက ဒီ HPV အမျိုးအစားတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားလဲ Pap tests လုပ်နေသင့်တယ်။
3. Osteoporosis and Fractured Bones အရိုးပျော့ရောဂါ။ Osteoporosis ဆိုတာ အရိုးတွေ အရင်ကလောက် မသန်မာဘဲ ကျွတ်ဆတ်လာတဲ့ရောဂါဖြစ်တယ်။ ကျိုးလွယ်လာမယ်။ အမျိုးသမီးတွေ သွေးဆုံး ချိန်နောက်ပိုင်း ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ တော်တော်တန်တန် ထိခိုက်ခံရတာနဲ့ ကျိုးလွယ်မယ်။ အသက် ၅ဝ ကျော်ရင် Osteoporosis Screening Tests လုပ်သင့်တယ်။ Dual Energy X-ray Absorptiometry (DXA) လို့ခေါ်တယ်။ Bone density testing အရိုးရဲ့ ထူထဲမှုကို စစ်နိုင်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ ၆၅ နှစ်ကျော်သူတိုင်းကို စစ်စေတယ်။
4. Skin Cancer အရေပြား ကင်ဆာ။ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးက Melanoma (မလင်နိုးမား) ဖြစ်တယ်။ အရေပြားရဲ့ အရောင်ခြယ် (ဆဲလ်) တွေမှာ ဖြစ်တယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေက မျိုးရိုးလိုက်ဖြစ်ကြ တယ်။ နေလောင်တာ၊ နေစာလှုံတာတွေကနေလဲ ပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ တခြား အရေပြား ကင်ဆာတွေက Basal cell နဲ့ Squamous cell skin cancers တွေဖြစ်တယ်။ စောစောသိရင် စောစောကုလို အသက် ပိုရှည်နိုင်တယ်။ American Cancer Society နဲ့ American Academy of Dermatology တွေကနေ လမ်းညွှန်ထားတာက အရေပြားတနေရာရာမှာ အရောင်။ ပုံပန်း၊ အရွယ်အစား ပြောင်းလဲ လာတာတွေ ရှိရင် ဆေးစစ်ပါ။
5. High Blood Pressure (Hypertension) သွေးတိုး။ အသက်ရလာလေလေ သွေးတိုးဖြစ်နိုင်လေ။ ကိုယ်အလေးချိန် များလေလေ ဖြစ်နိုင်လေ။ လူနေမှုပုံစံနဲ့လဲ ဆက်စပ်နေတယ်။ သွေးတိုးကြောင့် ဆိုးလှတဲ့ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်တွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Aneurysm သွေးကြောဖေါင်းရောဂါ၊ Heart disease နှလုံးရောဂါ၊ Stroke လေဖြတ်တာနဲ့ Kidney failure ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် ပုံမှန် သွေးဖိအားက 120/80 ရှိရမယ်။ 140/90 ထက်ကျော်ရင် သွေးတိုး ရှိချင်နေပြီလို့ သတ်မှတ်တယ်။
6. Cholesterol Levels (ကိုလက်စထော) အဆီဓါတ်။ အမျိုးအစား ၂ ခုထဲက LDL များနေရင် မကောင်းဘူး။ bad Cholesterol ခေါ်တယ်။ Atherosclerosis သွေးလွှတ်ကြောကျဉ်းတာ-မာတာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Plaque အလွှာ ပေါ်လာမယ်။ ကြာလာရင် Heart attack and Stroke တွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Atherosclerosis ရောဂါနဲ့ High blood pressure သွေးတိုးအပြင် Diabetes ဆီးချို နဲ့ Smoking ဆေး လိပ်သောက်တာ ဆက်စပ်နေတယ်။ Cholesterol တိုင်းတယ်ဆိုတာ Fasting blood lipid panel ခေါ်တယ်။ LDL မကောင်းတဲ့အမျိုးအစား၊ HDL ကောင်းတဲ့အမျိုးအစား နဲ့ Triglyceride အမျိုးအစားတွေကို သိနိုင်တယ်။ အသက် ၂ဝ ကျော်ရင် ၅ နှစ်တခါ စစ်နေပါ။
7. Type2Diabetes ဆီးချို (အမျိုးအစား ၂) တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတောင် ၃ ပုံ ၁ပုံက ဆီးချိုရှိနေတာကို မသိကြဘူး။ သူတို့ဆီမှာ သေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်မှာ ဆဌမလိုက်တယ်။ ဆီးချိုနဲ့ Heart disease နှလုံးရောဂါ၊ Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါ၊ Kidney disease ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ Blindness မျက်စိကွယ်တာ၊ Nerve damage အာရုံကြောထိခိုက်တာတွေ ဆက်-တွဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆီးချို ကို စောစောသိရင် Diet, Exercise, Weight loss အစားဆင်ခြင်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့တာနဲ့ ထိန်းထားနိုင်တယ်။ Fasting plasma glucose သွေးစစ်နည်းနဲ့စမ်းရတယ်။ blood sugar level သွေးထဲကသကြားဓါတ် 100 to 125 ဆိုတာ ဆီးချို ဖြစ်ချင်ချင်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ 126 ထက်များရင် ဆီးချို။ ၄၅ နှစ်ကျော်သူတိုင်း ကောင်းနေပေမဲ့ ၃ နှစ်တခါ စစ်နေပါ။ မျိုးရိုးရှိသူတွေ အလားအလာ ရှိသူတွေက ဒိထက်စောစော စစ်နေသင့်တယ်။
8. Human Immunodeficiency Virus (HIV) (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ) ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးရှိနေရင် AIDS ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သွေးနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအရည်တွေထဲမှာပါနေလို့ ဒါတွေကနေ ကူးစက်စေနိုင်တယ်။ ဖြစ်ရင် ပျောက်သွားတဲ့ အထိ ကုလို့ မရသေးဘူး ကာကွယ်ဆေးလဲ မပေါ်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ စောစောသိရင် သူများတွေကို မကူးအောင်၊ ဖြစ်နေတာ သက်သာအောင် လုပ်လို့ရတယ်။ အရင်ဆုံး ELISA or EIA နည်းနဲ့စမ်းရတယ်။ သွေးထဲမှာ HIV antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) ရှိ-မရှိစစ်တာဖြစ်တယ်။ နောက်တဆင့် Western blot assay နည်းဖြစ်တယ်။ သေခြာအောင် လုပ်တာပါ။ ဒါတောင် ထပ်စမ်းရသေးတယ်။ အများအားဖြင့် ပိုးဝင်ခံရပြီး ၂ လနေရင် စမ်းတော့ အပေါင်းပြတယ်။ တချို့က ၆ လနေမှပြတယ်။ အန္တရာယ်ရှိသူနဲ့ လိင်မဆက်ဆံဘဲနေတာ နဲ့ (ကွန်းမ်) သုံးပြီး ဆက်ဆံနည်းနဲ့သာ အကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်တယ်။ တခြား လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေ ကိုပါ ကူးမလာအောင်ဆင်ခြင်မှ HIV လဲ ကူးလာဘို့ အခွင်မသာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ ပိုးတွေ့ရင် ဆင်ခြင်စရာတွေ အများကြီး လုပ်ရမယ်။
9. Colorectal Cancer အစာဟောင်းအိမ်-ကင်ဆာဟာ ကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးရတာထဲမှာ ဒုတိယလိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အဆုပ်-ကင်ဆာ နဲ့ ရင်သား-ကင်ဆာပြီးနောက် တတိယလိုက်တယ်။ ဖြစ်ကာစမှာ Colon polyps ဆိုတဲ့ အသီးလေးကနေမှ ကင်ဆာဖြစ်လာလို့ ဒီအဆင့်မှာ သိပြီး ကုသသင့်တယ်။ Colonoscopy နည်းနဲ့ စစ်ရင် စောစောသိမယ်။ စစ်နေရင်းနဲ့ တွေ့ရင် တခါထဲ ထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်။ Flexible sigmoidoscopy ကရိယာကိုလဲ သုံးတယ်။ အသက် ၅ဝ ကျော်ရင် စစ်ဆေးသင့်တယ်။
10. Glaucoma မျက်စိ ရေတိမ်။ Optic nerve မျက်စိ-အာရုံကြောကို ပျက်စီးစေလို့ မျက်စိကွယ်စေနိုင်တယ်။ Primary open angle glaucoma အမျိုးအစားက အများဆုံးဖြစ်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ မခံစားဘဲနေလို့ သိရင် နောက်ကျနေတတ်တယ်။ အသက် ၄ဝ ကျော်ရင် ၂-၄ နှစ်တခါ စစ်သင့်တယ်။ မိသားစု ရာဇဝင်ရှိသူ၊ မျက်စိ ခိုက်မိဘူးသူ၊ (စတီရွှိုက်) ဆေးသောက်ဘူးသူတွေက ပိုဂရုစိုက်ဘို့ လိုတယ်။
11. Hepatitis B Screening အသဲရောင် (ဘီ) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကနေဖြစ်စေတယ်။ ပိုးဝင်ကာစမှာ အားယုတ်တာ၊ ဆီး-မျက်လုံးဝါတာ၊ ပျို့-အန်ချင်တာလောက်သာ ခံစားရတယ်။ သူတို့ထဲက ၁-၃% ကနေ Carriers ရောဂါသယ်ပို့နေသူတွေ ဖြစ်လာမယ်။ အသဲမှာ နာတာရှည်ရောင်တဲ့အဆင့်ကနေ အသဲ-ကင်ဆာ တချိန်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Hepatitis B surface antigen (HBsAg) test နည်းနဲ့ ပိုးရှိ-မရှိစစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ စစ်တာ အရေးကြီးတယ်။ သူ့ကလေးကို ကူးနိုင်တယ်။ မွေးမွေးချင်း ဆေးတွေထိုးရမယ်။ တခါစစ်လို့ မတွေ့တိုင်းတော့ ပိုးဝင်မထားဘူးလို့ ပြောမရသေးဘူး။ ထပ်စစ်ရမယ်။ Hepatitis B surface antigen (anti-HBs) test နည်းက အပေါင်းပြနေသူဟာ HBV antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) တွေရှိနေတာမို့ ရောဂါကို ခံနိုင်ရည်ရှိသူ ဖြစ်တယ်။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသူတွေလဲ အဲလိုပြမယ်။ Antibody to hepatitis B core antigen (anti-HBc) test စမ်းသပ်နည်း အပေါင်းပြတယ်ဆိုတာ HBV infection ရောဂါရှိနေတာဖြစ်တယ်။ နာတာရှည် အသဲရောင်နေတယ်။ သူများကိုလဲ ကူးစေနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် Acute infection လတ်တလော ကူးစက်ခံထားရပြီး နလံထနေတယ်၊ ခံနိုင်ရည်လဲ တစိတ်တပိုင်းရှိနေတာဖြစ်မယ်။ နောက်ထပ် စမ်းသပ်နည်း ၂ ခုထပ်လုပ်ရမယ်။ E antigen blood test နည်းက အပေါင်းပြနေရင် သွေးထဲ မှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ အများကြီးရှိနေပြီး၊ သူများကို အလွယ်တကူ ကူးစက်စေမယ်။ Hepatitis B DNA test စမ်းနည်းကနေ Viral load သွေးထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ဘယ်လောက်များနေသလဲ သိစေတယ်။ ဆေးကုတာ ထိရောက်မှု ကို တိုင်းတာနိုင်တယ်။ Liver function tests နည်းနဲ့ အသဲအခြေအနေကို သိစေတယ်။ Liver biopsy လုပ်ရင် အသဲရောဂါကို အသေအခြာ သိမယ်။
12. Hepatitis C virus (HCV) အသဲရောင် (စီ)။ Anti-HCV test နည်းနဲ့ Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) ရှိ-မရှိ သိနိုင်တယ်။ ပိုးဝင်ထားတာ အသစ်လား၊ အဟောင်းလား ခွဲမရဘူး။ HCV recombinant immunoblot assay (RIBA) test ကိုလဲ တွဲလုပ်နိုင်တယ်။ HCV antibodies ကိုဘဲ စမ်းတယ်။ ဒီ ၂ နည်းက အတူတူသဘောသာ သိရမယ်။ HCV RNA test ဆိုတာ အရည်အသွေးစမ်းတာဖြစ်တယ်။ Positive ဒါမှမဟုတ် Detected ဆိုတာ HCV viral RNA တွေ့လို့ဖြစ်တယ်။ Negative ဒါမှမဟုတ် Not detected ဆိုတာကို ဆေးကုသအပြီးစမ်းတယ်။ အခုဒီနည်းတွေကို သိပ်မလုပ်တော့ဘူး။ HCV Viral Load (HCV RNA test, Quantitative) နည်းက သွေးထဲမှာ viral RNA particles တွေဘယ်လောက်များလဲသိစေမယ်။ Viral load tests နည်းကို ဆေးကုနေတုံးလုပ်တယ်။ ဆေးကုကာစ ၃ လမှာ ခဏခဏစစ်တယ်။ ဆေးကု တာ အောင်မြင်ရင် ၄-၁၂ ပါတ်နေတော့ ၉၉% ကျသွားမယ်။ Viral genotyping နည်းက အမျိုးအစားခွဲသိစေတယ်။ အဓါကအမျိုးအစား ၆ ခုရှိတယ်။ USPSTF အဖွဲ့က ရောဂါလက္ခဏာ မရှိသူတွေကို Screening for (HCV) infection စမ်းဘို့ မလိုဘူးလို့ ဆိုတယ်။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ - အမျိုးသမီးတိုင်း လိုအပ်တဲ့ ဆေးစစ်ခြင်းများ
Posted by Alex Aung at 12:09 PM No comments:
““ကျုံကူးရွာသား ဦးသိန်းစိန် (သို့မဟုတ်) စစ်ပုံမကျသော စစ်သားတယောက်”
စာဖတ်ဝါသနာကြီးတဲ့၊ မျက်မှန်တပ်ထားသူ၊ ပဟေဋိဆန်ဆန် ဦးသိန်းစိန်တယောက် အာရှက အဆင်းရဲဆုံး တိုင်းပြည်၊ အထီးကျန်ဆန်ဆန် တိုင်းပြည်ကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ဘာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရသလဲ ဆိုတာကတော့ တိတိကျကျ အဖြေပေးဖို့ခက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂိုဘာ့ချောဗ်လို့ ခေါ်လာကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းစိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ ရေးကြသားကြတာတွေကလည်း နည်းပါတယ်။ ဒါကလည်း မြန်မာပြည်က လက်ရှိ အပြောင်းအလဲတွေက ကွဲလွယ်ရှလွယ် အခြေအနေကြောင့် ပြောဖို့ စောသေးလို့ လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်ဟာ နှလုံးရောဂါကြောင့် စင်ကာပူလည်း ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အစည်းအဝေးတခုအတွက် နယူးယောက်ကိုလည်း ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံတွေကို ရောက်တဲ့အခါမှာ မြန်မာပြည်ဟာ စီးပွားရေးအရ ဘယ်လောက် နောက်ကောက်ကျနေသလဲဆိုတာ သူ့ကို မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သလို ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွား နိုင်ပါတယ်၊ မြန်မာပြည်ဟာ အာရှမှာ အမွဲဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေကြားထဲမှာ ပဟေဋိဖြစ်နေတဲ့ ကြီးမားတဲ့ နောက်အကြောင်းတရပ်က ဦးသိန်းစိန်တယောက် ဘယ်ကနေဘယ်လို ထိပ်ဆုံးက ရာထူးကို ရသွားသလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်၊ တခြား အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်က ဦးသိန်းစိန်ဟာ စစ်တပ်ထဲမှာ အာဏာအခြေခံ မရှိပါဘူး။ သူဟာ ရည်မှန်းချက်ကြီးသူလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
အခုလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စည်းရုံးနိုင်တာဟာ သမ္မတဦးသိန်းရဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုကြပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ မြင်နေကျ စစ်အရာရှိတယောက်၊ အထူးသဖြင့် ရက်စက်မှုတွေနဲ့ နာမည်ဆိုးတဲ စစ်အရာရှိတယောက်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးနေ၀င်းမောင်က သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ စစ်သားပုံ ဘယ်လိုမှ မပေါက်တဲ့ စစ်သားတယောက်လို့ ပြောပါတယ်။
သမတဦးသိန်းစိန်ဟာ အဂတိလိုက်စားမှုတွေ ဖောင်းပွနေတဲ့ စစ်အစိုးရခေတ်မှာ မိတ်ဆွေတွေ၊ မိသားစုတွေကို အခွင့်ထူးတွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးတတ်တဲ့ တခြားအရာရှိတွေနဲ့ မတူတဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ လူလို့လည်း သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ မနှစ်မတ်လက အာဏာလက်ခံတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာလည်း အခုလိုပဲ ရဲရင့်ပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့ ကတိတွေကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်တုန်းက သမတ စကားတွေဟာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ တလွဲတချော် စီးပွားရေးစီမံခန့်မှုတွေ အောက်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ပြည်သူတွေ အပြောင်းအလဲကို ပြင်းပြင်းပြပြ တောင့်တနေတယ်ဆိုတာကို သိလို့ ချွေးသိပ်တဲ့သဘောပဲ ဖြစ်မယ်လို့ သံသယရှိသူတွေလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
http://www.maukkha.org/index.php/book-store/essay-maukkha/1971-maukkha-burmese-president-thein-sein မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်
"မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်၊ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ကြံ့ခိုင်စေချင်တယ်ဆိုရင်၊ မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်၊ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ဖန်တီးပေးဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ မီဒီယာတွေကို ထပ်ပြီးတော့ ချုပ်ကိုင်ဖို့ မလုပ်သင့်ဘူး" ၀ါရင့် သတင်းစာဆရာ လူထုဦးစိန်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မေး - မတ်လ ၁၉၊ ၂၀ မှာ Conference on Media Development in Myanmar အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မှာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာ ပြည်တွင်းက လူတစ်ချို့ကို ခေါ်တယ်။ ပြည်ပက လူတစ်ချို့ကို ခေါ်တယ်။ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ UNESCO တို့ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့(IMS) လည်း ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တပ်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကတော့ Media Development in Myanmar လို့ ဆိုပါတယ်။ သတင်းတော်တော်များများမှာ ဖော်ပြခဲ့တာကတော့ ဆွေးနွေးပွဲက ရလာတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ပုံနှိပ်မီဒီယာ ဥပဒေအတွက် ဒုတိယမူကြမ်း ရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာ ထည့်သွင်းမယ်လို့ ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ အခု ပုံနှိပ်မီဒီယာ ဥပဒေအတွက် ဒုတိယမူကြမ်း ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးပြည့်စုံအောင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကလူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အခုလိုမျိုး Conference လုပ်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက မဇ္ဈိမသတင်းဌာန အင်တာဗျူးမှာ ဖြေထားတာ ဖတ်ရပါတယ်။ ဆရာ့ အမြင်ကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့က သူတို့ပြောသလို မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်။ စတုထ္ထမဏ္ဍိုင် ကြံ့ခိုင်စေချင်တယ်ဆိုရင် မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့က ဖန်တီးပေးဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ မီဒီယာတွေကို ထပ်ပြီးတော့ ချုပ်ကိုင်ဖို့ မလုပ်သင့်ဘူး။ ဘာကြောင့် မလုပ်သင့်လဲဆိုတော့ ရှိတဲ့ ဥပဒေတွေကိုက သိပ်များနေပါပြီ။ အသရေဖျက်မှု၊ အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေမှု ၊ ဆူပူအောင် လှုံ့ဆော် စည်းရုံးမှု၊ အီလက်ထရောနစ် အက် ဥပဒေ၊ ရုံးတော်ကို အကြည်ညို ပျက်စေမှု စသည်အားဖြင့် ဥပဒေတွေက အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဥပဒေတွေကို လိုချင်သလို ဆွဲဆန့်လို့လည်း ရတယ်။ ကြိုက်သလို ကျယ်အောင် ပုံကြီးချဲ့လို့လည်း ရတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ခဲ့ကြလို့လည်းပဲ ရှေးခေတ်အဆက်ဆက်ကလည်းပဲ သတင်းစာတွေ အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရတာတွေ၊ ပုဒ်မ ၅နဲ့ ချိတ်ပိတ်ခံရတာတွေ၊ အဖမ်းခံရတာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့တယ်။ တကယ်တန်း သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိမှ စတုထ္ထမဏ္ဍိုင်ဟာ ကြံ့ခိုင်မယ်။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရှိဘူး၊ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်လို့ မရဘူးဆိုရင် စတုထ္ထမဏ္ဍိုင် ဆိုတာလည်းပဲ အပြောပဲ ရှိမယ်။ လက်တွေ့ ဘာမှ မရှိဘူး။
လူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ပြောကြားခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်၊ မိမိယုံကြည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ ကိုင်စွဲထားခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခွင့်ဆိုတာတွေကို အခြေခံဥပဒေကနေ အာမခံချက် ပေးထားပြီးသား။ လူသားတိုင်း ခံစားရမယ့် အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ အခု မီဒီယာဥပဒေတွေ လုပ်ခြင်းဟာ ဒီအခြေခံဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ရာလည်း ကျတယ်။ အခြေခံဥပဒေက ပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေးကို တခြားဘယ်သူကမှ ပိတ်ပင်တားဆီးလို့ မရဘူး။ အခြေခံဥပဒေဟာ တိုင်းပြည်မှာ အာဏာအရှိဆုံး ဖြစ်တယ်။ အခြေခံဥပဒေက ပေးထားတဲ့ဟာကို ပိတ်ပင် တားဆီးလုပ်လို့ရှိရင် ပိတ်ပင်တားဆီး ခံရသူတွေက တရားစွဲလို့ရတယ်။ ဒါ အခြေခံဥပဒေကို မလေးစား မလိုက်နာမှု နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ရန် ကြံစည်မှုနဲ့ တရားစွဲလို့ရတယ်။
အခုရှိနေတဲ့ မီဒီယာဥပဒေ အပါအ၀င် အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေတို့ ဘာတို့ အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေတဲ့တို့ စတဲ့ ဥပဒေတွေအားလုံးကတော့ ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ဥပဒေတွေဖြစ်တယ် ...
မေး- ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ပြောသွားတဲ့ အထဲမှာတော့ အသစ် ပြန်လည်ရေးဆွဲနေတဲ့ ပုံနှိပ်မီဒီယာဥပဒေဟာ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးဖို့ မဟုတ်ဘူး၊ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးနိုင်ဖို့ လုပ်နေတာလို့ ပြောပါတယ်။ နောက်ပြီး မီဒီယာဥပဒေကို စတင် ကန့်ကွက်စဉ်က မီဒီယာဥပဒေသမားတွေ ပြောခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း Article 19 ပါ အခွင့်အရေးတွေအတိုင်း လုပ်ဖို့ ပြောခဲ့တာတွေကိုလည်း ပြန်လည် ချေပခဲ့တာ ဖတ်ရပါတယ်။ ဥပမာ Article 19 ကို သုံးတဲ့အခါ Article 29 မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်ကို သတိထားဖို့ ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။ ဒီလိုပြောလာတဲ့ အပေါ်မှာရော ဆရာ့အမြင်က ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
အဲဒီတော့ သတင်းမီဒီယာတွေကို မချုပ်ကိုင်ရဘူးလားလို့ မေးစရာ ရှိတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ ချုပ်ကိုင်ရမယ်။ စစ်သားတွေမှာလည်း စစ်သားတွေ လိုက်နာဖို့ စည်းကမ်း ဥပဒေတွေနဲ့ ချုပ်ကိုင်တယ်။ ဆရာဝန်တွေမှာလည်း ဆရာဝန်တွေ လိုက်နာဖို့ စည်းကမ်း ကျင့်ဝတ်တွေ ရှိတယ်။ အလားတူပဲ ကျောင်းဆရာတွေမှာလည်း ကျောင်းဆရာ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ ချုပ်ကိုင်တယ်။ သတင်း မီဒီယာသမားကိုလည်း သတင်းမီဒီယာ ကျင့်ဝတ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ သတင်းစာဆရာ ကျင့်ဝတ် ဥပဒေတွေ၊ နိုင်ငံတိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ အဲဒီကျင့်ဝတ်တွေက သတင်းမီဒီယာတွေကို ထိန်းချုပ်ပါတယ်။ မလုပ်သင့်တာတွေ မလုပ်ဖို့၊ မမှန်မကန်တာတွေ မလုပ်ဖို့၊ အကျင့် စာရိတ္တတွေ မဖောက်ပြားဖို့၊ ဒါတွေကို ထိန်းချုပ်ပါတယ်။ အဲဒီ ထိန်းချုပ်တဲ့ ကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်းတွေကို သတင်းမီဒီယာသမားတွေက သာလျှင် ရေးဆွဲရပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်းကပဲ ရေးဆွဲတယ်။ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက ၀င်ဆွဲလို့ မရဘူး။ ဥပဒေဌာနက ၀င်ဆွဲလို့ မရဘူး။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို ဆရာဝန်တွေမှ သိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဆရာဝန်တွေအတွက် ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းတွေကို ဆရာဝန်တွေကပဲ ချမှတ်ရတယ်။ အလားတူပဲ သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို ရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဘာမှ နားမလည်ဘူး။ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနဆိုရင် နကန်းတစ်လုံး မသိဘူး။
မေး- Conference ဖွင့်ပွဲနေ့မှာပဲ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက ပြောခဲ့ပါတယ်။ မီဒီယာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် အဆင့်သုံးဆင့် ခွဲပြီး လုပ်နေတယ်။ ပထမအဆင့်က ဖြေလျော့ပေးမယ်။ ဒုတိယ အဆင့်က ၁၉၆၂ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းပြီး ပုံနှိပ်မီဒီယာ ဥပဒေရေး ဆွဲမယ်။ တတိယအချက်က ပုံနှိပ်မီဒီယာ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီး စာနယ်ဇင်းတွေ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရား ဟန်ချက်ညီအောင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကူညီပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတော့ သူပြောခဲ့တာအပေါ် ဆရာ့အနေနဲ့ရော ဘယ်လို မှတ်ချက်ပေးချင်ပါလဲ။
ဖြေ - ခုနက ပြောသလိုပဲ။ ဒါဟာ ထိန်းချုပ်မှုပဲ။ ထိန်းချုပ်မှု မှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်တယ်။ ဘယ် သတင်းမီဒီယာသမား စစ်စစ်၊ ဘယ် Professional မဆို ကိုယ့်လည်ပင်းကို စွပ်မယ့် ကြိုးကွင်းကို ဘယ်သူမှ ၀င်ပြီးတော့ ကျစ်မပေးဘူး။ အဲလိုဆိုရင် အဲဒီလူဟာ Professional သတင်းသမား စစ်စစ် မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကို ၀င်ပြီးတော့ ကြိုးကျစ်တဲ့အထဲမှာ ၀င်ပါတဲ့သူတွေဟာ ခေတ်ပျက်ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ သူတို့ အခွင့်အရေးကို မျှော်ကိုးပြီးတော့၊ သူတို့ အကျိုးစီးပွားတစ်ခု အတွက် ဒီထဲမှာ ရောယိမ်းလိုက် ဘသားယိမ်းလိုက် ၀င်ယိမ်းကြတာဟာ ခေတ်ပျက် ဂျာနယ်လစ်တွေပဲ ဖြစ်တယ်။ Professional ဂျာနယ်လစ်တွေ မဟုတ်ဘူး။
မေး - ဒါပေမယ့် အဲဒီ Conference မှာ ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာ (exile media) တွေလည်း ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ ပြန်ရေးကြတဲ့ သတင်းတွေအရ Conference အပေါ် အကောင်းမြင် ရှုထောင့်က ရေးခဲ့တာ ဖတ်ရပါတယ်။ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တုန်းက DVB၊ ဧရာဝတီအပါအ၀င် ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာ ၁၁ ခုက အစိုးရ ရေးဆွဲနေတဲ့ မီဒီယာ ဥပဒေနဲ့ သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် တင်းကြပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ ကြေညာချက်တစ်ခု ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာလည်း သူတို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေကို မပြတ်ဖတ်နေတဲ့သူဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လို သုံးသပ်ချင်ပါသလဲ။
ဖြေ - တချို့တွေက ဆရာနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ပြောတဲ့ စကားက တစ်မျိုးပဲ။ သူတို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ ပြန်ရေးတဲ့ အခါကျတော့ တစ်မျိုးပဲ။ သူတို့ ဆရာနဲ့ တွေ့တဲ့ အချိန်ကျတော့ ဆရာတို့နဲ့ တစ်သဘောတည်း ကိုက်ညီနေတာပဲ။ ပြန်ရေးတဲ့အခါကျမှ အစိုးရက ပွင့်လင်းလာပါပြီ။ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစကိုတော့ ခြေလှမ်းနင်းနေပါပြီ။ လျှောက်လှမ်းနေတာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့နေရပါပြီ။ ဒါတွေ ပြောတာပဲ။ ဆရာတို့နဲ့ တွေ့တဲ့အခါကျတော့ ဒါတွေ သူတို့ လုံးဝမယုံဘူးတဲ့။ အပြောင်းအလဲတွေ လုံးဝမယုံ ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစ မြင်တယ်ဆိုတာလည်း လုံးဝသူတို့ မမြင်ပါဘူးလို့ သူတို့ ပြောတာပဲ။ ဒါဟာ သူတို့ ဒီမှာလာပြီးတော့ လုပ်ခွင့်သာဖို့အတွက် အခွင့်အရေး မျှော်ကိုးပြီးတော့ လာပြီးတော့ ရောယောင်နေကြတာပဲ။ ဂျာနယ်လစ် စစ်စစ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး- တစ်ချို့ exile media တွေကို သူတို့ အခြေစိုက်ထားတဲ့ နိုင်ငံက အဲဒီနိုင်ငံထဲမှာ မနေစေချင်တော့ပဲ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ဖို့ တွန်းအားပေးတာတွေ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ချို့တွေဆိုရင်လည်း ထောက်ပံ့ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက အထောက်အပံ့ပေးတာတွေ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်။ ထပ်ပြီး ရပ်ဆိုင်းခံရမယ့် အခြေအနေတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း သိနေရပါတယ်။ နောက်ပြီး အခုလုပ်ခဲ့တဲ့ Conference ကို နော်ဝေအစိုးရက ထောက်ပံ့ ကူညီပေးတယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေလည်း အပြင်မှာ ကြားရပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလပိုင်းတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံထဲ ပြန်ဝင်ဖို့ လုပ်လာတဲ့ exile media တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်မှုတွေကတော့ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ exile media တွေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိတွေ့ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိနေခဲ့တဲ့ ဆရာ့ဆီမှာရော ဘယ်လိုအမြင်မျိုး ရှိနေမလဲ။
မေး - နှစ်ငါးဆယ်လုံးလုံး အလွန်အကျွံ ဖြစ်ခဲ့မှုတွေကို ရှောင်ကြဉ်လိုကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က Conference မှာပြောခဲ့တယ်လို့ မဇ္ဈိမသတင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားတွေအရ နှစ်ငါးဆယ်လုံး အလွန်အကျွံ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ရှောင်ကြဉ်သွားမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
ဖြေ - ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဦးရဲထွဋ်က ဘယ်သူလဲ။ စစ်ဗိုလ်က လာတဲ့လူ၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက ခိုင်းလို့ဆိုရင် ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်မှာပဲ။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက ဘယ်သူလဲ။ ခိုင်းရင် ခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်မှာပဲ။ သူယုံတာ လုပ်လို့ မရဘူး။ သူယုံကြည်ရာ ပြောလို့ မရဘူး။ ဒီသဘာဝတရားကြီးက ပျောက်မသွားပါဘူး။ အခု လက်ရှိအတိုင်းလည်း ရှိနေတာပဲ။ ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီအစိုးရ ဒီပုံစံအောက်မှာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အမေရိကန်နိုင်ငံတို့၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနဆိုတာ လုံးဝ မရှိဘူး။ မီဒီယာ ဥပဒေဆိုတာ မပြောနဲ့တော့။ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနဆိုတာကို မရှိဘူး။ စင်ကာပူလို နိုင်ငံမှာ ထိုင်ဝမ်လို နိုင်ငံမှာတော့ ရှိမှာပေါ့။ စင်ကာပူလို နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှ မဟုတ်တာပဲ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံစစ်စစ်တွေမှာ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးတောင် မရှိပါဘူး။ မီဒီယာ ဥပဒေရှိဖို့ဆိုတာ ထားတော့။ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာဆိုတာ ရုပ်ရှင်သမားတွေက သူတို့ဖာသာသူတို့ ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ rating သတ်မှတ်ပြီးတော့ ပေးတာပဲ ရှိတယ်။ ဆင်ဆာလုပ်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။
ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ထားတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ဖို့ ထားတာ မဖြစ်စေရဘူး။ အခုရှိနေတဲ့ မီဒီယာဥပဒေ အပါအ၀င် အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေတို့ ဘာတို့ အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေတဲ့တို့ စတဲ့ ဥပဒေတွေ အားလုံးကတော့ ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လုံးဝကို ကန့်ကွက်တယ်။ တကယ်တန်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်ချင်လို့ဆိုရင် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနပါ ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒါမှ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံစစ်စစ် ဖြစ်မယ်။ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနဆိုတာ ရှိနေသရွေ့ကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ မခေါ်နိုင်ဘူး။
ဖြေ - ဒီပေါ်မှာတော့ အသေးစိတ်တွေတော့ မသိရဘူးပေါ့။ ဒီအစည်းအဝေးလည်း မတက်ရဘူး။ ဘာတွေ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း အသေးစိတ် မကြားရဘူး၊ မသိရဘူး။ အသေးစိတ်တွေတော့ မပြောချင်ဘူး။ သို့သော် ယေဘူယျ ခြုံပြောရ မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီ Conference မှာ ပြည်ပကနေလာပြီး စာတမ်းဖတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ တွေ့ရတာ လည်းရှိပါတယ်။ ခြုံပြီးတော့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းစဉ်က Media Development in Myanmar၊ စာတမ်းဖတ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း Media Development in Myanmar ဆိုတဲ့ အကြောင်းပဲ ဖတ်သွားကြတာပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီမီဒီယာ ဥပဒေဆိုတဲ့ဟာက ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက နောက်ဖေးပေါက်က ဆွဲသွင်းလာတဲ့ဟာပဲ။ ပြောရလို့ရှိရင်တော့ ၀က်ခေါင်းချိတ်ပြီး ခွေးသား ရောင်းတဲ့ ပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါဝက်ခေါင်းမှန်း၊ ခွေးသားမှန်း သိတဲ့အတွက် ဒီခွေးသားကို
ငါးနုပ်သန်းအိုးကပ်ချက်၊ ပဲကြီးဟင်းချို၊ မရမ်းသီးထောင်း
နွေရာသီရောက်တော့ ရာသီဥတုကလည်းပူတော့ ဟင်းကို အပူအစပ်တွေချက်စားဖို့အဆင်မပြေဘူးနော်။ ဒါကြောင့်အချိုအချဉ်အရသာ ဟင်းလေးတွေချက်စားတာပဲကောင်းပါတယ်။ သွေးတိုးစာတွေမဖြစ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးသေး။
ငါးနုပ်သန်း (သို့) ငါးတစ်တုံးပုစွန်အိုးကပ်ချက်
ငါးနုပ်သန်း (သို့) ငါးတစ်တုံး ၂၀ကျပ်သား၊ ပုစွန် ၅ ကျပ်သား၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၂ဥ၊ ကြက်သွန်နီ ၂ဥ၊ ပင်စိမ်း၊ရှမ်းနံနံ ၃ပင်စီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၂လုံး၊ ငရုတ်သီးခြောက် ၅တောင့်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းရှည် ၅တောင့်၊ ဆီ ၂ ကျပ်သား၊ ဆား၊ငံပြာရည်၊ဟင်းခတ်မှုန့်၊နနွင်း အနည်းငယ်စီ၊ မန်ကျည်းမှည့် ကွမ်းသီးလုံးခန့်၊ စိမ်းစားငါးပိ လက်မခန့်
ငါးတစ်တုံး (သို့) ငါးနုပ်သန်းကို ရေစင်အောင်ဆေးပါ။ ငါးနုပ်သန်းဆိုလျှင် ပါးဟက်နှင့် အူထုတ်ပါ။ ပုစွန်ခေါင်းဖြုတ်ထားပါ။
ငါးကို ငံပြာရည်၊ဆား၊ဟင်းခတ်မှုန့်၊ နနွင်းမှုန့် နယ်ပြီး ၁၀မိနစ်ခန့်နှပ်ထားပါ။ မန်းကျည်းမှည့်ကို အရည်ဖျော်ထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ နီ တစ်ပုံစီ ထောင်းထားပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကို နှစ်ခြမ်း ခြမ်းထားပါ။ ငရုတ်သီးခြောက်ကို မညက်တညက် ထောင်းထားပါ။
အိုးမကပ်သည့် ဒယ်အိုးမီးဖိုပေါ်တင်ပါ။ အိုးဖင်မှ အငွေ့တထောင်းထောင်းထလျှင် ဆီထည့်ပါ။ ဆီကျက်လျှင် ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်ပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ ဆီကျက်လျှင် ကြက်သွန်နီထည့်ပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပါ။ ငရုတ်သီးခြောက် ထောင်းထည့်ပါ။ စိမ်းစားငါးပိ လက်မခန့်ထည့်ပါ။
ဆီကျက်လျှင် ငါးထည့်ပါ။ ရေနည်းနည်းထည့်ပြီး ဆီပြန်အောင် ချက်ပါ။ ဆီပြန်လျှင် မန်ကျည်းမှည့်ထည့်ပါ။ အိုးမကပ်အောင် ခဏခဏ အိုးကိုလှုပ်ပေးပါ။ အငန်လိုပါက ငံပြာရည် ထည့်ပါ။ ပင်စိမ်းနှင့် ရှမ်းနံနံထည့်လိုက်ပါ။
အဖုံးအုပ်ပြီး ငါးမိနစ်ခန့်ကြာလျှင် အသင့်စားသုံးနိုင်ပါသည်။
(တစ်ညအိပ်ခန့်ကြာမှ စားလျှင် ပို၍ကောင်းမွန်ပါသည်။)
မရမ်းသီးအနေတော် ၅လုံး၊ ငရုတ်သီးခြောက် ၁၀ တောင့်၊ ပုစွန်ခြောက် ၁၀ကောင်၊ စိမ်းစားငါးပိ ဆီးဖြူသီးလုံးခန့်၊
ငရုတ်သီးထောင်းပါ။ ငရုတ်သီးညက်လျှင် ပုစွန်ခြောက် ထည့်ထောင်းပါ။
ပုစွန်ခြောက်ညက်ခါနီးတွင် စိမ်းစားငါးပိ၊ ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့် ထည့်ပါ။ မရမ်းသီးကို ၂ခြမ်းခြမ်းထည့်ပါ။ အပေါ့အငန် မြည်းပါ။
ရိုးရှင်းလွယ်ကူသလောက် ထမင်းစားအလွန်မြိန်သည့် ဟင်းတစ်ခွက်ရရှိပါမည်။ မရမ်းသီးအစား သရက်သီးစိမ်းနှင့်လည်း စားသုံး နိုင်ပါသည်။
မော်လမြိုင်ခရမ်းသီး ၃လုံး (သို့) ထောပတ်ခရမ်းသီး ၁ လုံး
ပုစွန်ခြောက် စားပွဲဇွန်း ၁ဇွန်း
ဆား စားပွဲဇွန်း ၁ဇွန်း
စိမ်းစားငါးပိ (မီးကင်ပြီး) လက်မခန့်
ကြက်သွန်နီ ဥကြီး ၂ဥ
ခရမ်းသီးကို ရေဆေး အ၀တ်နှင့် သုတ်ပြီး မီးဖုတ်ပါ။ ခရမ်းသီးမီးဖုတ်ကို အကျက်ညီအောင် လှန်ပေးပါ။ တစ်လုံးလုံး ဘက်ညီကျက်လျှင် မီးဖိုပေါ်မှ ထုတ်ထားပါ။ ငရုတ်သီးကို သီတံနှင့် သီပြီး မီးကင်ပါ။ ငါးပိကို ဆား၊ဟင်းခတ်မှုန့်နယ်ပြီး၊မီးကင်ပါ။
ငရုတ်သီးနွမ်းလျှင် ငရုတ်ဆုံထဲ ငါးပိ ငရုတ်သီးရောထောင်းပါ။
ပုစွန်ခြောက်ထောင်းပါ။ ခရမ်းသီးအပြင်အရေခွံများကို ခွာလိုက်ပါ။ ငရုတ်ထောင်းထဲ ဆား၊ဟင်းခတ်မှုန့်ကို စားပွဲ၁ဇွန်းကျစီထည့်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်းထည့်ထောင်းပါ။
ငရုတ်သီးထောင်းညက်လျှင် ခရမ်းသီးလှီးထည့်ပြီး နယ်ပါ။ မန်ကျည်းမှည့်ရေဖျော်ထည့်ပါ။ ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီးထည့်ပါ။ နံနံပင်ထည့်ပါ။
Posted by Alex Aung at 7:47 PM 1 comment: